Muslimiin 3 Saacadood Oo Kaliya Soomaya iyo kuwa 21 Saacadood Xiriir Ah Soomaya [Warbixin].
Erdogaan oo Mareykanka ugu hanjabay in uu ka xiri doono saldhigga Melleteriga Incirlik.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyada Weeraro khasaara dhaliyay oo ka dhacay Boosaaso iyo Gaalkacyo.
DAAWO: AlKataa'ib Oo soo saartay Qeybtii 2aad Filimka "Miraha Shariicada 4" oo lagusoo bandhigayo Qeybinta Xoolaha Zakada.
Saciid Deni oo sheegay in uusan aqoonsanayn Guddiga Doorashooyinka DF.
Mareykanka oo iclaamiyay in kumanaan kamid ah ciidamadiisa uu kala baxayo Afghanistan.
Al Shabaab oo weerar cusub ku qaadday saldhigga ciidanka Kenya ee deegaanka Qooqaani.
Sunday June 03, 2018 - 07:46:45 in Wararka by Super Admin
Wadamad la isku yiraahdo Iskandanefiyaanka ee qaaradda Yurub hadii Muslimiinta ku dhaqan ayaa dhibaato xoogan ku qabaan fatwooyin is khilaafsan oo ku aaddan saacadaha ay soomayaan, maadaama qorraxda ay joogeyso 21 saacadood xiriir ah.
Sanad Kasto marka la gaaro bisha Ramadaan ayuu khillafkani soo shaac baxaa waxaana banaanka Yimaada fatwooyin is barbar yaac ah oo ku saabsan saacadaha dadku ay soomayaan iyo saacada ay afurayaan, taas oo sabab ay u tahay Maalinka oo dheeraanaya iyo habeenkii oo waqtigiisaba oo iska noqonoyo wax ka yar 3 saacadood.
Wadamada Iskandanefiyanka ayaa iyaga laftoodu kukala duwan waqtiyada, kuwa ugu hooseeyo ayaa sooma 18 saac, halka kuwa ugu waqtiga dheerna ay soomaan 21saac oo xiriir ah.
Arrintan ayaa imaanaysa xili ay aad usoo badanayaan dadka Muslimnta ah ee kakala yimid dalalka caalamka islaamka ee tagaya wadamadaasi, ilaa hadana lama helin fatwa mid ah oo xadideysa waqtiyada dadku ay soomayan iyo waqtiga ay afurayaan.
Waxaa jira dadaallo ay sameeyeen dad wadaada ah oo ay ku doonayaan in ay bulshada Musliminta ah ku mideeyaan, iyagoo xadidaya saacada la afurayo iyo saacada ugu dambeya ee la saxuuranayo, balse wali khilaafku wuu taagan yahay waxa uuna salka ku haya masaa'il fiqi ah.
Qof ku dhaqan Magaalada Oslo ee wadanka Norway ayaa sheegaya in qorraxdu ay iska joogto 21 saacadood oo toos ah, habeenkuna uu yahay 3 saacadood oo kaliya balse ma ahan kaligii ee waxaa la qaba bulshada ku dhaqan wadama iskandaneveianka oo idil.
Mararka qaar waxaa dhacda in qaar kamid ah dadka Musliminta ah ee ku dhaqan wadamadaasi in ay kasoo tagaan marka la gaaro Bisha Ramadaan si ay ugu soomaan meel kabaxsan wadamada ay qorraxdu joogeyso wax ka badan 20 saacadood.
Inta badan wadamada Caalamka ayaa ku kala duwan waqtiga soonka, waxaana ugu waqti dheer wadanka Sweden oo ka tirsan wadamada la isku yiraahdo iskandanevianka ee dhaca galbeedka qaarada yurub oo saacadaha soonka ay gaarayaan 21 saac, waxaana ugu gaaban Jazeerada WAKAN oo katirsan wadanka Cumaan taas oo dadkeeda ay Soman 3saac oo kaliya.
Wadamada Carabta ayay dadka ku dhaqani soomaan inta u dhexeyso 17 ilaa 13 saacadood, waxaana ugu waqti dheer wadanka Al-Jazaa'ir oo laga soomo 16:58 daqiiqo halka Somalia ay tahay wadanka ugu waqtiga gaaban oo dadkeedu ay soomaan 13 saacadood, marka lagasoo tago Jazeerada WAKAN oo aan horey aanu usoo sheegnay in dadkeedu Soman 3 saac oo kaliya.
Daawo Video: Dowladda Hindiya oo ku dhawaaqday go'aan lagu takoorayo dadka Muslimiinta ah.
Video: Sheekh Xassan oo dhalinyarada Muslimiinta ugu baaqay in ay khatar geliyaan nafta Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Jeneral David Mohoozi "Al-Shabaab Waxay leeyihiin Shabakado Sirdoon Oo Xoog leh" [Warbixin].
Roobab dhimasho iyo burbur hantiyadeed sababay oo ka da'ay Soomaaliya [Warbixin].
ICJ Oo Sheegtay in Xukuumadda Miyanmar Ay Ka Dambeysay Dhibaatooyinkii Loo Geystay Muslimiinta Rohingiya.
Trump Oo Cafis ufidiyay Askar Muslimiin ku xasuuqay Wadamada Afghanistan iyo Ciraaq.
Ururka NATO Oo qarka u saaran burbur [Warbixin].